Hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha oo ka hadlay Soomaali lasoo musaafuriyay
Hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha oo ka hadlay Soomaali lasoo musaafuriyay SONNA April 17, 2012 Markacadeey
General C/llaahi Gaafoow Maxamuud Taliyaha Hoggaanka Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay isa soo taryaan dadka Soomaaliyeed ee dib laagu soo celinayo dalka kaddib markii ay dowladdaha reer galbeedka ah shaki weyn ka qaadeen dadka Soomaalida ah.
Taliyaha oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee u anbabaxa dalalka Yurub iyo America dib loogu soo celiyo dalka, taasi oo uu sheegay in ay dhibaato ku tahay shacabka.
Sidoo kale waxa uu tilmaamay in dalalka reer galbeedka ay shaki weyn oo lala xiriirnayo argagixiso ay ka qabaan dadka Soomaalida ah, taasi oo uu xusay in ay sii dheertahay Soomaalida oo iyana si sharci darro ah u galla dalalka laga soo musaafuriyo.
General Goofoow ayaa hoosta ka xariiqay in Waaxda hoggaanka, Socdaalka iyo Jinsiyadaha aysan aqoon sabab ay muwaadiniintaasi Soomaaliyeed ee dalkooda lagu celiyay dib ugu sii celiyaan, balse baaritaanno ay marsiyeen dhammaan dadkii soo gaaray gudaha garoonka Aadan Cadde International Airport.
Shalay ayaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ay ka soo dageen Sagaal muwaadin oo laga soo musaafurriyay dalka Mareykanka oo ay markii horrey ku galleen si sharci darro ah, waxaana arrintasi ay dhibaato xooggan ku tahay Soomaalida ku sii qul qulleysa dalalka Yurub iyo America, maadaama hadda Soomaalida dib loogu soo celinayo dalkooda.